मुख्यसचिव बन्न दौडधुप सुरु, को बन्दैछ मुख्यसचिव ? « Deshko News
मुख्यसचिव बन्न दौडधुप सुरु, को बन्दैछ मुख्यसचिव ?
सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको पदावधि सकिनै लाग्दा नयाँ मुख्यसचिव बन्न सरकारका वरिष्ठ सचिवहरू दौडधुपमा लाग्न थालेका छन् । मुख्यसचिव क्षत्री आगामी ७ कात्तिकमा ५८ वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुँदै छन् ।
‘दसैं तिहारको लामो बिदा पर्ने हुनाले अब मुख्यसचिवका रूपमा काम गर्न १८ दिन मात्रै बाँकी छ’, मुख्यसचिव क्षत्रीले शनिबार भने । उनी गत २९ असारमा मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए ।
क्षत्रीको अवकाश मिति नजिकिँदै गर्दा निजामती क्षेत्रकै सबैभन्दा उच्च पदका रूपमा रहेको मुख्यसचिव बन्न मुख्यतः तीन जना सचिव प्रतिस्पर्धामा छन् । तत्कालीन मुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदी पदावधि १ वर्ष बाँकी नै रहँदा पद त्यागेर एडीबीमा जागिर खान गएपछि क्षत्रीले छोटो अवधिका लागि मुख्यसचिव हुने अवसर पाएको आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
दौडमा तीन सचिव
तर, मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले आफू तीन जना प्रतिस्पर्धीमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा आफू हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘मुख्यसचिव बनाउँदा ज्येष्ठतालाई नै मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका आधारमा एक नम्बर मै हुँ ।
राजनीतिक नेतृत्वले यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ’, सचिव अधिकारीले भने । उनले थपे, ‘ब्युरोक्रेसीलाई एउटा नम्र्स र सिस्टममा चलाउन पनि ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन दुवैलाई महत्वपूर्ण आधार बनाएर मुख्यसचिव नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’ज्येष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा अधिकारी, दोस्रो नम्बरमा उपाध्याय र तेस्रो नम्बरमा गृहसचिव रेग्मी हुन् ।
अर्का प्रतिस्पर्धी ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना निकै न्यून छ । उनको राजनीतिक दलका नेतासँग खासै निकट सम्बन्ध छैन । मन्त्रीहरूले गर्न खोज्ने खराब काममा यिनले साथ नदिने गरेको भए पनि उनीमाथि निर्णय क्षमता कमजोर रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उपाध्याय मुख्यसचिव नभए पनि ०७५ साल ६ साउनसम्म सचिवका रूपमा कार्यरत रहनेछन् ।
सिस्टम’ बिगार्ने सुवेदी
२० साउन ०७५ सम्म कार्यकाल भएका तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव पद त्यागेर १ साउनदेखि एडीबीमा जागिर खान गएका थिए । मुख्यसचिवको पद बीचैमा छाडेर हिँडिदिएपछि मुख्यसचिवको अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली नै बिग्रन पुगेको थियो ।
सुवेदी तोकिएको कार्यकाल मुख्यसचिवका रूपमा रहेको भए हालका मुख्यसचिव क्षत्रीले मुख्यसचिव हुने अवसर पाउँदैनथे भने मुख्यसचिव बन्ने दौडमा रहेका रेग्मी, अधिकारी र उपाध्याय कसैको पनि मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना रहँदैनथ्यो । सुवेदीभन्दा पहिला उनीहरू सबै सेवानिवृत्त हुन्थे ।
एडीबीमा जागिर खान नगएर २० साउनसम्म मुख्यसचिव सुवेदी कार्यरत भइरहेको भए त्यतिबेला ज्येष्ठ सचिवका रूपमा लोकसेवा आयोगका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायबीच मात्रै मुख्य सचिवका लागि प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था थियो । तर, अहिले भने उनीहरू दुवैको मुख्यसचिव हुने बाटो बन्द भएको छ ।